प्रहरी हिरासतमा रहेकी आस्था राउत एक्कासि बिरामी, अस्पताल लगियो ! – Khabarhouse
प्रहरी हिरासतमा रहेकी आस्था राउत एक्कासि बिरामी, अस्पताल लगियो !
Khabar house | १४ माघ २०७६, मंगलवार ०३:१५ | Comments
काठमाडौ । गायिका आस्था राउतलाई अस्पतालमा लगिएको छ । बिरामी भएको भन्दै प्रहरीले त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लु क्रस अस्पताल लगिएको हो । अस्पताल प्रशासनका अनुसार राउतलाई अस्पतालको चौथो तल्लाको ४२३ कोठा नम्बरमा राखेर उपचार भैरहेको छ । उनको के सम्बन्धी उपचार भइरहेको हो त्यो भने खुलाएको छैन ।
राउतलाई सोमबार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय लगिएको थियो। त्यसपछि उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले ४ दिन थुनामा राखेर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोमबार साँझ ८ बजेसम्म काठमाडौ परिसरमा रहेकी राउतले आफू हिरासतमा नबस्ने भनेपछि अस्पताल लगिएको स्रोतले बताएको छ ।
त्रिभुवन विमान स्थलमा कार्यरत प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि छ। आफूलाई दु’र्व्यवहार गरेको आ रोपमा प्रहरी जवान रमिशा श्रेष्ठले उनी वि रुद्ध अ भद्र व्यवहारको मु’द्दा दायर गरेकी थिइन । माघको पहिलो साता त्रिभुवन विमान स्थलमा राउत र प्रहरी बीच भनाभन भएको थियो । भनाभन भएपछि राउतले त्यसबारे असन्तुष्टि पोख्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
भिडियोमा राउतले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको दाबी गर्दै प्रहरीलाई गालीगलौच गरेकी थिइन् । राउत माथि अ’भद्र व्यवहारको मु’द्दा दर्ता गरेको प्रहरीलाई सोही अनुसार आस्थालाई प’क्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमती दिएको थियो । भनाभन भएपछि राउतले त्यसबारे असन्तुष्टि पोख्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन् । न्युज २४ नेपालबाट